गोबर्धन पूजा | Hamro Patro
आज तिहारको चौथो दिन अर्थात गोबर्धन पूजा । यस दिन खेतबारी जोतेर र गाढा तानेर किसानलाई सहयोग गर्ने गोरुको पूजा गरिन्छ । त्यसैले यस दिनलाई हल तिहार पनि भनिन्छ । जोत्ने गोरु र बाच्छालाई माला लगाइन्छ । चामलको पिठोमा रंग मिसाएर रंगिचंगी छाप बनाइ तिनको शरीरमा लगाइन्छ । तिनलाई पूजा गरेरी मिठो खाने कुरा खुवाइन्छ ।
त्यस्तै गोबरलाई गोबर्धन पर्वतको प्रतीक मानेर गोबर्धन पर्वतको पूजा गरिन्छ । द्वापर युगमा भगवान् कृष्णले आफ्नै हातले गोबर्धन पर्वत उचाली गोकुलबासीलाई बचाएरर स्वर्गका राजा इन्द्रको घमन्ड चुर गरेकाले कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन घरघरमा गोर्बधन पूजा गर्न थालिएको किम्बदन्ती छ ।
अर्को धामिर्क मान्यताअनुसार गोवंशको सुरक्षा एवं बृद्धि लागि भगवान कृष्णले घाँसपात र पानीले सम्पन्न गोबर्धन पर्वतको पुजा गर्ने परम्परा बसालेको बिश्वास छ । कतिपय ठाउँ र ममुदायमा आजकै दिन गाइको पूजा पनि गरिन्छ ।
आज देखि देउसी खेल्न सुरु गरिन्छ । देउसीमा नाचगान गरी शुभआर्शीवाद बाँड्दै घरघरमा जाने पुरानो चलन छ । यसको प्रचलन बली राजाको पालादेखि भएको शास्त्रीय मत छ । देउसीले तिहारको महत्व बढाउँदै लगेको छ । देउसेहरु परम्परागतरूपमा नाचगान, भेषभूषासहित भैलो खेल्दै गाउँघर, टोल डुल्ने गर्छन् । श्रद्धाले दिएको चामल, सेलरोटी, फलफूल, दक्षिणा ग्रहण गर्छन् । प्रायः केटाहरूले खेल्ने देउसीमा पनि विभिन्न देवकथा, उपकथा, शुभवचन भट्याउँदै रमाइलो गर्छन्।
शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार बली राजा दानी थिए । उनी माग्न आउने कसैलाई पनि रित्तो हात फर्काउँदैनथे । उनी आफ्नो दानशीलतामा घमण्ड गर्दथे । त्यसैले उनको त्यो घमण्डलाई तोड्न भगवान् विष्णुले पुड्को रूपधारण गरेर तीन कदम टेक्ने जमिन राजा बलीसँग मागे । बली राजाले दुई कदम राख्ने जमिन त दिए । तेस्रो पाउ (कदम) राख्ने ठाउँ पाएनन् । त्यसैले बिष्णुले बलीको शिर अर्थात टाउको मागे । त्यसपछि बलीले आफ्नो शिरै बिष्णुलाई दन दिए । आफ्नो सबै चिज दान दिँदा पनि बली राजा प्रशन्न भएको देखेर विष्णु भगवानले ‘वर्षमा तीन दिन तीनै लोकमा तिम्रो अधिपत्य रहोस् । ती दिन सबैले तिम्रो गुणगान गाऊन्’ भन्ने बरदान दिएका थिए । त्यसपछि कालान्तरमा यही कुरालाई स्मरण गरी मानिसहरूले बिष्णुले ‘देउ शिर’ भनी मागेकोले ‘देउसी रे’ भन्दै देउसी खेल्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएको बिश्वास छ ।
देउसी गाउँदै यसो भनिन्छः
हे भन भन भाइहोः देउसी रे !
राम्ररी भनः देउसी रे !
स्वर मिलाइ कनः देउसी रे !
हामी त्यसैः देउसी रे !
आएका हैनौः देउसी रे !
बर्ष दिनकोः देउसी रे !
चाडले गर्दाः देउसी रे !
यसरी भट्याएपछि घरबेटीले नाङ्लोमा धान, चामल, फलफूल, रोटीसहित नगद दक्षिणा दिन्छ । त्यसपछि देउसे आशिष दिएर विदा हुन्छन्
← आज लक्ष्मी पूजा	Hamro Patro Version 8.0 [Lollipop Update] →